Calculators nke Ngwaahịa, Ngwaọrụ, yana Ngwa | Martech Zone
Martech Zone Ngwa bụ mkpokọta nke obere ngwaọrụ ndị dị na weebụ, ngwa na weebụ na ihe mgbako nyere ndị na-ere ahịa n'efu iji nyere ha aka rụọ ọrụ kwa ụbọchị.
Zụlite nyocha na ijide n'aka na ị nwere azịza ziri ezi na ị nwere ike ịdabere na mkpebi azụmaahịa gị chọrọ ezigbo nka. Nke mbụ, ị ga-ahụrịrị na a jụrụ ajụjụ gị n'ụzọ na-adịghị anabata nzaghachi. Nke abụọ, ị ga-ahụrịrị na ị nyochara mmadụ iji nweta nsonaazụ ọnụ ọgụgụ. Kwesighi ịjụ onye ọ bụla, nke a ga-abụ nnukwu ọrụ na oke ọnụ. Researchlọ ọrụ nyocha ahịa
Kedu Adreesị IP m? Na Otu esi ewepu ya na nchịkọta Google
Tọzdee, Eprel 1, 2021 Tọzdee, Eprel 1, 2021 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ ị chọrọ adreesị IP gị. Di na nwunye di na nwunye ka ichotara ihe nche ma obu dozie uzo di na Google Analytics. Buru n'uche na adreesị IP nke sava weebụ na-ahụ abụghị nke adreesị IP nke gị, ọ bụ adreesị IP nke netwọk ị nọ. N'ihi ya, ịgbanwe netwọk ikuku ga-emepụta adreesị IP ọhụrụ. Ọtụtụ ndị na-enye ọrụ Ntanetị anaghị ekenye ụlọ ọrụ azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ oke